Andravoahangy : nahazo tsena ny mpivarotra … | NewsMada
Andravoahangy : nahazo tsena ny mpivarotra …
Nidina ifotony tetsy amin’ny tsenan’ Andravoahangy ny delegen’ny boriborintany fahatelo, Andriamamonjisoa Rado sy ireo ekipany ary ny lehiben’ny tsena, omaly. Nanentana ireo mpivarotra amoron-dalana hiditra amin’ny ara-dalana ao anatin’ny tsena izy ireo satria efa misy toerana malalaka voatokana ho azy ireo ao anatin’ny tsena. Miisa 200 latsaka ny toerana mbola malalaka eny amin’ny « étale » izay ho an’ny mpivarotra legioma. Namboarina ihany koa ny « pavé » na lalana miditra ao an-tsena.
Efa nisy ny naoty izay nomena azy ireo, ny tokony hialany eny amoron-dalana fa tsy maintsy miditra ao anatin’ny tsena avokoa efa ho roa herinandro izay, hoy ny lehiben’ny tsena. Mbola mitohy rahampitso ny fandaminana ny tsena eo Andravoahangy ary hihatra amin’izay ny sazy ho an’izay mbola minia mivarotra eny amoron-dalana.
Marihina fa ny mpivarotra tantsaha dia mivarotra manomboka amin’ny telo ora maraina ka hatramin’ny 8 ora maraina ihany no mamelatra entana izy ireo. Tsy misy mivarotra intsony ny sisin-dalana manomboka eo.
Tokony halalaka araka izany ny fifamoivoizana na ho an’ny mpiasa mamonjy birao na ho an’ny mpianatra eny an-toerana satria tsy hisy intsony ny mpivarotra amoron-dalana.